Vaovao Samihafa Archives - Page 114 sur 210 -
25/08/2017 admintriatra 0
Hanafana indray ny tokantranony i Jaojoby ary hanolotra seho takariva miavaka ny sabotsy 26 aogositra manomboka amin’ny 9 ora alina. Toa ny mahazatra dia ny gadona salegy izay tena manavanana azy miaraka amin’ireo mpitendriny sy …Tohiny
Cercle Franco Malgache Anosy
« Cabaret dorent’s », izay azo adika hoe « seho takariva miavaka », io no lohatenin’ny fampisehoana atolotr’i Françis Turbo anio alina etsy amin’ny Cercle Franco-Anosy anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Ankoatra ny ampahany amin’ireo hatsikana efa hain’ireo …Tohiny
Sary Hosodoko : Fampirantiana farany ho an-dRoland Raparivo
24/08/2017 admintriatra 0
60 taona niangaliana ny hosodoko. Marihiny amin’ny fampirantiana etsy amin’ny Alliance française Andavamamba ny fankalazana ny faha-60 taona niangalian-dRaparivo ny sary hosodoko. Nanomboka omaly izany ary tsy hifarana raha tsy ny 9 septambra ho avy …Tohiny
Seho takariva : Hiverina amin’ny fanaony taloha i Stenny
Mpanakanto fantatra teo amin’ny sehatry ny mozika Rock. Rehefa nirona tamin’ny fiangaliana hira ara-pilazantsara efa ho taona maromaro izao, hiverina indray amin’ny fanaony taloha i Stenny. Ny sabotsy izao amin’ny seho takariva hotanterahiny etsy amin’ny …Tohiny
« 1 … 112 113 114 115 116 … 210 »
Falifaly sy miramirana èry ireo mitonona ho “solombavambahoakan’ny fanovana” mahita ireo mpianatra avy amin’ny sekolim-panjakana sasany namonjy ny kianjan’ny 13 Mey nilanja sora-baventy. Ny lisea Nanisana moa no isan’ny mpitarika tamin’izany. Tsy tonga ho azy ...Tohiny
Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Ampy izay ny rà latsaka…”
Basikety – Coupe du Président : Tompondaka ny ASCB sy ny Fandrefiala